‘नेपाल सरकारले सक्षम युवाहरुको ग्यारेन्टी लिन सक्नु पर्छ’ – उपाध्यक्ष आङङिमा शेर्पा | newsnepali.com
‘नेपाल सरकारले सक्षम युवाहरुको ग्यारेन्टी लिन सक्नु पर्छ’ – उपाध्यक्ष आङङिमा शेर्पा
Published on: Tue, Apr 5th, 2016 By Diwas Pokhrel
‘लोकतान्त्रिक सगरमाथा आरोहण अभियान २००७’ का संयोजक, नेपालका विभिन्न हिमाल लगायत सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नु भएका आरोही एवं संगीतको क्षेत्रमा छट्टै पहिचान बनाउन सफल क्यालिफोर्निया शेर्पा एसोसिएसनका उपाध्यक्ष आङङिमा शेर्पासँग अमेरिकाको सान फ्रान्स्सिको, क्यालिफोर्नियामा न्यूज नेपाली डट कमका सम्पादक दिवस पोख्रेलसँग भेटहुँदा वर्तमान समसामयिक विषय वस्तुलाई लिएर तयार गरिएको अन्तवार्ता यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ –
अमेरिकामा क्यालिफोर्निया शेर्पा एसोसिएसनको आवश्यकता किन पर्यो ?
क्यालिफोर्निया बे एरियामा लगभग चारसय शेर्पा समुदायको बसोवास रहेको छ । नेपालमा शेर्पा भन्नाले आफ्नै किसिमको संस्कृति छ । त्यो संस्कृतिलाई विदेशमा आएर विर्सन हुँदैन, यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर बसेका शेर्पा समुदालयलाई आफ्नो संस्कृतिको बारेमा सचेत गराउन आवश्यक ठान्यौ । यसैगरी नेपाली दाजुभाईहरुसँग मिलेर संस्कृति विकासमा भूमिका खेल्नका लागि क्यालिफोर्निया शेर्पा एसोसिएसनको आवश्यकता महशुस भयो ।
क्यालिफोर्निया शेर्पा एसोसिएसनको भावी योजनाहरु के–के छन् ?
यो संस्था भर्खरै सुरु भएको हो । यसले लगभग पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । यो संस्थाको सस्थापक फुरी शेर्पा हुनुहुन्छ र हाल यो संस्था हुर्कने क्रममा छ । भविष्यमा शेर्पा समुदायका लागि कमुनिटी सेन्टर बनाउने र उक्त स्थानमा शेर्पा जातिको भाषा प्रशिक्षण, कला लगायत अन्य थुप्रै कार्यहरु गर्न सकिन्छ । हामीले पूजा लगायत अन्य कार्यक्रमहरु गर्नका लागि गुम्बा खोज्नुपर्ने, पार्टी हल खोज्नुपर्ने आदि जस्ता समस्याहरु छन् । यिनै समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै एसोसिएसनले आफ्नै घर–जग्गा, जसमा हल लगायत अन्य सुविधाहरु भएको संरचना तयार गर्ने सोच बनाएका छ ।
विगतका समयमा एसोसिएसनले गरेका उपलब्धिहरु प्रकाश परिदिनुहोस् न ।
एसोसिएसनका तर्फबाट वार्षिक रुपमा दुईदेखि तीनवटा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौ । यस संस्थाले वर्षेनी लोसार कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । बुद्ध जयन्ति जस्तो पवित्र कार्यक्रम अन्य संघ–संस्थाहरुसँग मिलेर गर्दै आइरहेका छौ ।
सगरमाथा आरोहणका क्रममा १८ जना शेर्पाहरु वित्निुभएको थियो । उहाँहरुको परिवारको लागि भनेर हामीहरुले लगभग ३० हजार डलर सहयोग गरेका थियौ । उक्त रकम नेपाल शेर्पा संघ मार्फत परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका थियौ । नेपालमा महाभूकम्प गएका बेला आर्थिक संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालको दुर्गम स्थानहरुमा राहत सामग्री पु¥याएका थियौ । ती स्थानहरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग पुग्न सकेको थिएन । छोटकरीमा भन्नुपर्दा हालसम्म एसोसिएसनले सामाजिक कार्यमा समय खर्च गरेको छ । भविष्यमा भने नौलो काम गर्ने सोच बनाएका छौ । विदेशमा बसेर देशको लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट लिएका छौ ।
तपाई कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही एवं सांगेतिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउनु भएको व्यक्ति कसरी एसोसिएसनमा काम गर्ने मनस्थिति बनाउन पुग्नु भयो ?
सन् २००७ मा मैले नेपालमा ‘लोकतान्त्रिक सगरमाथा आरोहण अभियान’ कार्यक्रमको परिकल्पना गरें । मेरो अध्यक्षतामा कार्य सम्पन्न भएको थियो । सन् २००६ देखि नै सोलुखुम्बुको अति विकट गाउँ जुनबेसी भन्ने ठाउँमा ‘कुसुदेबु पब्लिक हेल्थ मिसन’ भन्ने सस्था मार्फत हस्पिटल बनाएर सहयोग गर्दै आइरहेका छौ । मेरो कलिलो उमेर हुँदादेखि नै संघ–संस्थाहरुमा आवद्ध भएर काम गरिरहेको छु, जसका कारण नयाँ–नयाँ अनुभवहरु पनि प्राप्त भएका छन् ।
नेपालमा रहेको बेला ‘नेपाल शेर्पा कलाकार समाज’ भन्ने संस्था मार्फत काम गर्ने दौरान विदेश विभाग प्रमुख भएर आफ्नो भूमिकालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने अवसर मिलेको थियो । उक्त संस्थामा लगभग तीन वर्ष विताएको थिएँ । संघ–संस्थाहरुमा रहेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएर नै यस विषयमा चासो बढेको हो ।
एसोसिएसनलाई अगाडि बढाउन गर्नुपर्ने कामहरु के हुन सक्दछन् ? छोट्करीमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न ।
बे एरियामा रहँनु भएका सम्पूर्ण शेर्पाहरुको सहयोग संस्थाले पाएको देख्दिन । एसोसिएसन भने पछि बोर्ड मेम्बरको मात्र एसोसिएसन होइन । क्यालिफोर्निमा बसोवास गर्नु भएका सबै शेर्पाहरुको साझा संस्था हो । संस्थालाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन आवश्यक छ । हाम्रो संयुक्त प्रयासमा मात्र असम्भव कामहरु सम्भव हुन सक्दछन् भन्ने सोच बनाउनु प¥यो । संस्थालाई सबैजनाको सहयोगको खाँचो छ । यो सोचका साथ अगाडि बढ्न सकेका खण्डमा संस्था बलियो हुन्छ । यसरी सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सकेका खण्डमा शेर्पा समुदायलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुका लागि साझा संस्था बन्न सक्छ ।
संघ, संस्थाहरुमा तपाईको लगाब राम्रै देखिन्छ, भावी दिनमा एसोसिएसन भित्र तपाईको भूमिका कस्तो हुन सक्छ ?
क्यालिफोर्निया शेर्पा एसोसिएसनमा रहेर काम गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी लागेको छ । मैले सक्दो समय दिएर संस्थाको काममा लागिपरेको छु । अवको केही महिनामा एसोसिएसनको साधारण सभा बस्दै छ । यो बेला नयाँ नेतृत्वको चयन हुनेछ । मलाई संस्थामा रहेर योगदान दिने इच्छा छ, त्यसैले एसोसिएसनले मलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको खण्डमा पुनः काम गर्ने सोच बनाएको छु । एसोसिएसनमा उपलब्धिमूलक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।
प्रसङ्ग बदलौ, नेपालको परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा माओवादीहरुले जनयुद्ध सुरु गरे, त्यहाँबाट शान्ति सम्झौता भयो । यसपछि माओवादी सरकारमा आए, उनीहरुले केही गर्लान भन्ने आशा थियो । माओवादीहरुले सारा नेपालीको आशालाई निराशामा परिणत गरिदिए । नयाँ नेपाल, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भनेका थिए । आखिरमा केही पनि भएन । नेपालको संविधान लेख्न ८÷१० वर्ष लाग्यो । नेपालको संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन भए जस्तो लाग्दैन । मधेसी, जनजाति लगायतले आन्दोलन गरिरहेका छन् । संविधानमा सबैलाई समेट्न नसकिएको कारण देश डामाडोल अवस्थामा छ । नाकाबन्दी जस्तो समस्याले राजधानी जस्तो ठाउँमा दाउरामा भात पकाएर खानुपर्ने अवस्था, ग्यास, इन्धन, खाद्यान्नको अभाव आदिले गर्दा जनता दुःखी भएको पाएको छु ।
देशको अवस्था राम्रो हुनुको सट्टा दिनानुदिन विग्रदै गएको जस्तो लाग्दैन ?
देशको अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो लाग्छ । नेपाल सुन्दर देश, हिमालै हिमाल भएको राष्ट्र भनेर संसारमा चिनिएको थियो । देशको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा कहिले चक्काजाम त कहिले हड्ताल अनि नेपाल बन्द, दुर्घटना आदि जस्ता समस्याहरुले गर्दा नेपाली सुरक्षित छैनन् । नेपालमा विहान हिडेको मानिस बेलुका घर फर्किएर आउछ कि आउँदैन भन्ने अवस्था छ । देशको स्थिति विग्रिएको अवस्थाले गर्दा समाजिक सुरक्षा भन्ने विल्कुलै छैन ।
जनतालाई सुविधा भन्ने केही छैन । सामान्य कुरालाई स्मरण गरौ, बाटोको अवस्था हेर्दा नै देशको स्थिति के छ भन्ने झल्किन्छ नि । देशमा भष्ट्राचार अति नै छ । सरकारबाट आएको बजेट इन्जिनियर, ठेकेदार, राजनीतिक पार्टीबाट सुंरक्षित गुन्डा नाइके गर्दै सही ठाउँमा पुग्दा २५ प्रतिशतमात्र बाँकी हुन्छ । यो २५ प्रतिशतमा पनि ठेकेदारले ५ प्रतिशत नाफा खाएर काम गर्दा बाटो विग्रने र समस्या दोहोरिरहने अवस्था छ । राजधानी जस्तो ठाउँको बाटो पीच भएको तीन महिनामा नै खाल्टैखाल्टा हुने अवस्था सबैले देखिरहेका छौ ।
नेपालका लागि विदेशमा रहँनु भएका तपाईंहरु जस्तो युवाहरुको भूमिका के हुन सक्छ ?
देशमा कडा नीति लागु गर्न सक्ने नेताको खाँचो छ । जसले विकासका कामहरुलाई अगाडि बढाउन सकोस् । हामी आरोहीहरु मात्र नभएर विदेशमा पढेका नेपालीहरुले स्वदेशमा गएर आपूmले हासिल गरेका शिक्षा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण हुनु प¥यो । यस किसिमका युवाहरुलाई अपरच्युनिटी बनाइदिनु प¥यो । नेपालमा राम्रो शिक्षा हासिल गरेका युवाहरुलाई सरकारले रोजगार दिन सकेको छैन । युवा विदेशीनु पर्ने मुख्य कारण नै यही हो । नेपालमा नाताबाद र कृपाबाद बढी छ । मन्त्रीले भान्जो, भतिज, दिदीको आफन्त आदि, आदिलाई ठाउँ–ठाउँमा घुसाउने प्रवृति छ । नेपालमा युवा शक्तिको पहुच बढाउन सक्नु प¥यो । देशमा स्थिति राम्रो भयो भने विदेशमा रहेका युवाहरुको भूमिका उल्लेखनीय बन्न सक्छ । नेपाल सरकारले संक्षम युवाहरुको ग्यारेन्टी लिन सक्नुपर्दछ ।